'Laba abagxeka i-ANC banezimfihlo esizozidalula ngokuhamba kwesikhathi' | News24
'Laba abagxeka i-ANC banezimfihlo esizozidalula ngokuhamba kwesikhathi'
Johannesburg – UMengameli Jacob Zuma ugxeke izitha zakhe ezingaphakathi nalezo ezingaphandle kwe-ANC, wathi abanye kubona basetshenziswa yizitha zeqembu ngemizamo yokuhlakaza i-ANC.
Ekhuluma eralini ye-ANC ebiseBushbuckridge, eMpumalanga, ngoMgqibelo, uZuma uthe labo abagxeka yena ne-ANC bathengwe yilabo abangafuni ukudedela amandla okulawula umnotho.
UZuma utshele abalandeli be-ANC ukuthi iqembu lizama ukuvala igebe lezomnotho elikhona ezweni, okuyinto eyenza idlanzana kanye nalabo ababengabacindezeli baphelelwe ubuthongo ebusuku.
OLUNYE UDABA: Angilona isela futhi angiyona inja - Zuma
"Yingakho benokwesabela ukuthi sizowuthatha umnotho. Bafuna ukuthena amandla i-ANC ngoba bayazi ukuthi ukuthi i-ANC iyona kuphela inhlangano ezama ukulungisa izinto.
"Balawula yonke into, thina siyahlupheka. Yingakho bezonda i-ANC,” kuqhuba uZuma.
Uphinde wagxeka amaqabane e-ANC nalabo ababengamalungu ayo ngokukhuluma kabi ngaye esidlangaleleni, wathi basetshenziswa yisitha.